Zimbabwe's Music Icon Dismisses Ill Health Reports - allAfrica.com
Zimbabwe's Music Icon Dismisses Ill Health Reports
The celebrated music giant Oliver Mtukudzi, affectionately known as Tuku by his fans, has dismissed rumours of ill health after he cancelled his weekend shows.
Zimbabwe: Tuku Returns to Work, Well
The Herald, 4 December 2012
Superstar Oliver Mtukudzi is alive and yesterday returned to work after he suffered severe exhaustion due to his diabetic condition at the weekend. Mtukudzi who is affectionately… Read more »
An Oliver Mtukudzi collection CD cover.
Zimbabwe: Tuku to Grace Nama Awards
Popular musician Oliver 'Tuku' Mtukudzi remains the father not in shaping his legacy only but nurturing local artistes' talents. Read more »
Zimbabwean Musician to Feature On Collaborative Album
Oliver Mtukudzi, Charles Charamba and Sandra Ndebele-Sibindi will feature in a collaborative album to raise awareness about the importance of reading and libraries. Read more »
Zimbabwe: Tuku, Charamba to Feature On Collaborative Album
Zimbabwe: Tuku, the Charambas an Interesting Combination
New Ambassadorial Role for Zimbabwe's Music Icon
Zimbabwe music superstar, Oliver Mtukudzi, has been appointed ambassador and mentor to four young Zimbabwean artists who are set to embark on a four-week tour of Europe in March ... Read more »
Zimbabwe: New Ambassadorial Role for Tuku
Zimbabwe: More Music, No Rest for Tuku
Nigeria: 22-Year-Old Miss Nweke Wins Miss South East Nigeria 2018